Kheyre oo ku baaqay in cid gaar ah la wareegin doorashooyinka - Awdinle Online
Kheyre oo ku baaqay in cid gaar ah la wareegin doorashooyinka
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadlay ansixinta heshiiskii dhawaan laga gaaray Doorashada dalka 2020/2021 oo Maanta ay meel-mariyeen Xildhibaanada labada Golle ee Baarlamaanka Federaalka.
Kheyre oo Qoraal soo saaray ayaa waxaa uu ku boggaadiyay Go’aankii Xildhibaanada labada Gole ee Baarlamaanka sida wadajir ah aheyd ugu ansixiyeen heshiiska doorashada, isagoo xusay in Tallaabadaas dalka ay u jiheyneyso dariiqii Doorashada.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku baaqay in nidaamka Doorashada dalka ka dhaceysa uu noqdo mid loo dhan yahay, isla markaana daah furan oo u qabsoonta si xor iyo xalaal ah.
“Waxaan bogaadinayaa go’aanka ay labada gole ee baarlamaanku wadajirka ugu ansixiyeen heshiiska doorashada. Tallaabadaas ayaa dalka u jiheyneysa dariiqii doorashada. Waxaan ku baaqayaa in nidaamka Doorashadu uu noqdo mid loo dhanyahay, daah furan oo u qabsoonta si xor & xalaal ah” ayuu yiri Kheyre.
Xasan Cali Kheyre ayaa ku dhawaaqay inuu yahay Musharax Madaxweynaha dalka Soomaaliya, isagoo tan iyo markii uu shaaciyay inuu Musharax yahay Muqdisho ka bilaabay kulamo kala duwan.
Previous articleJubbaland oo Guddi u saartay dadkii ay xasuuqeen Ciidanka Kenya
Next articleTaliyaha Booliska Soomaaliya oo gaaray Baydhabo